Google na-eme ka onyonyo ọha na eze dị ka foto foto, nke ahụ bụ nsogbu | Martech Zone
Google na-eme ka onyonyo ọha na eze dị ka foto foto, nke ahụ bụ nsogbu
Na 2007, ama-ese foto Carol M. Highsmith nyere ya ndụ n'oge ndụ ya niile Ọba akwụkwọ nke Congress. Ọtụtụ afọ ka e mesịrị, Highsmith chọpụtara na ụlọ ọrụ na-ese foto nke ụlọ ọrụ Getty Images nọ na-akwụ ụgwọ ikikere maka iji ihe onyonyo ọha na eze a, na-enweghị nkwenye ya. Ya mere ọ gbara akwụkwọ ikpe $ 1 ijeri, na-azọrọ na e mebiri ihe nwebisiinka ma na-ebo ebubo n'ụzọ gabigara ókè na ịkpọ aha ụgha nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ foto 19,000. Thelọ ikpe dịnyeere ya, mana ọ bụ ikpe dị elu.
Ikpe nke Highsmith bụ akụkọ ịdọ aka ná ntị, na-egosipụta ihe egwu ma ọ bụ ihe ịma aka ndị na-ebili maka azụmaahịa mgbe a na-emeso ihe ngosi ọha na eze dị ka foto foto. Iwu gburugburu ojiji nke foto nwere ike ịdị mgbagwoju anya ma mekwaa ya ka ọ bụrụ ihe mgbagwoju anya site na ngwa dịka Instagram nke na-eme ka ọ dị mfe maka onye ọ bụla ịse na ịkekọrịta foto. Na 2017, ndị mmadụ ga-elu nke 1.2 puku ijeri foto. Nke ahụ bụ ọnụ ọgụgụ na-emenye ụjọ.
Successga nke ọma ire ahịa n’ụwa taa nwere ike ịdabere na akara ọ bụla na - eji onyonyo arụ ọrụ nke ọma iji zụlite njirimara na aha ọma, mụbaa mmata, dọrọ uche, ma kwalite ọdịnaya. Izi ezi — nke akara akara uzọ nke afọ puku afọ- o bu igodo. Ndị ahịa anaghị azaghachi foto ndị esere ese ma ọ bụ hatọ. Dị mkpa iwekota authentic onyonyo gafee weebụsaịtị ha, mgbasa ozi mmekọrịta ha na ihe ahịa ha, nke mere ha ji na-atụgharịkwu ezigbo foto foto saịtị dị ka Dreamstime na ọha na eze oyiyi. Tupu i jiri onyonyo ọ bụla, agbanyeghị, azụmaahịa ga-arụ ọrụ ụlọ ha.
Ghọta Ntanetị ngalaba Images
Ihe onyonyo ohaneze nweere onwe ya site na nwebisiinka, ma ọ bụ n'ihi na ha nwụrụ ma ọ bụ na ọ dịtụghị mbụ - ma ọ bụ na ọnọdụ pụrụ iche ebe onye nwe nwebiisinka ji obi ya nyefee ikike nwebisiinka ha. Mpaghara ọha nwere ọtụtụ ihe oyiyi na ọtụtụ isiokwu, na-anọchite anya akụ bara uru. Ihe oyiyi a nweere onwe ha iji, dị mfe ịchọta, ma na-agbanwe agbanwe, na-eme ka ndị na-ere ahịa nwee ike ịchọta ezigbo onyonyo dabara na mkpa ha. Otú ọ dị, naanị n'ihi na ihe oyiyi ọha na eze nweere onwe ya pụọ ​​na nwebisiinka apụtaghị na ndị na-ere ahịa nwere ike ịhapụ usoro nyocha, nke nwere ike ịdị nwayọ, ma si otú a, dị oke ọnụ. Kedu ihe kpatara ị ga - eji budata onyonyo efu n'efu ụbọchị ị ga - ewepụ ya, ma ọ bụ ka njọ, tufuo ọtụtụ nde dollar na ikpe?
Public ngalaba ihe oyiyi na foto foto abụghị otu ihe ahụ, ma jiri nlezianya jiri ihe oyiyi ọha na eze mee ihe. Companylọ ọrụ ọ bụla na-eji onyonyo ngalaba ọha chọrọ ịghọta ihe egwu dị na ya.
Otu ihe kpatara eji esere foto na ihe osise mpaghara dị ka ihe a na-agbanwe agbanwe bụ na ụlọ ọrụ dịka Google gbalịrị ime ka ọ dị ka ha dị. Ndị na-azụ ahịa na-echigharị oge niile na ngalaba aha ọha n'ihi na Google na-ebute ha n'ihu foto foto site na ịgbagha nsonaazụ ọchụchọ organic. Nkwupụta a nwere ike itinye azụmaahịa na nsogbu. Ọ bụrụ na mmadụ na-achọ foto foto, ha ekwesịghị ịhụ nsonaazụ maka onyonyo ngalaba ọha, dịka foto anaghị egosi mgbe mmadụ na-achọ foto na ngalaba ọha.
Gini mere Google ji eme nke a? Enwere nkọwa ole na ole. Otu bụ na Matt Cutts, onye bụ isi nke mgbochi spam, hapụrụ Google na 2016. Anyị na-ahụ spam dị ukwuu na SERP n'oge na-adịbeghị anya, gụnyere nke Google onwe gi n'isiokwu banyere omume kacha mma. Achọpụtaghị akụkọ. Ọzọ bụ na AI na-achịkwa algọridim ahụ ugbu a ọ nweghị ọfụma dịka mmadụ ga-atụ anya n’aka Google. Dị ka ụzọ saịtị mgbasa ozi adịgboroja si arụ ọrụ, ọ na-akwalite ụdị ọdịnaya na-ekwesịghị ekwesị. Ọzọkwa, nkwupụta a nwere ike ịbụ mmegwara maka mkpakọrịta azụmaahịa foto ndị gbara akwụkwọ na Google maka atụmatụ Google Images ya na asọmpi asọmpi ma ọ bụ ọbụlagodi na-ezighi ezi, ebe Google na-eme nnukwu okporo ụzọ sitere na Google Images; (a na-eme atụmatụ na 85% nke ihe oyiyi ebudatara na weebụ na-ekesa site na Google Images). Fficzọ okporo ụzọ nke na-alọghachi na Google Images ga-emepụta ego mgbasa ozi.
Eziokwu bụ na onyonyo ngalaba ọha enweghị atụmatụ nchekwa nke foto ngwaahịa. Naanị n'ihi na onyonyo dị na ngalaba ọha apụtaghị na ọ nwere onwe ya pụọ ​​n'ihe ize ndụ nke ịda iwu nwebisiinka, ma ọ bụ ịda iwu nke ikike ndị ọzọ, dị ka ikike ndị yiri nke ndị mmadụ na-egosi na mbiet ahụ. N'okwu nke Highsmith, okwu a bụ enweghị nlebara anya site n'aka onye na-ese foto na ikike ikikere dị oke egwu, mana enweghị nkwenye sitere na ụdị ihe atụ nwere ike bụrụ aghụghọ.
N'afọ mbụ a, Leah Caldwell gbara Chipotle akwụkwọ maka ihe karịrị ijeri $ 2 n'ihi na o kwuru na ụlọ ọrụ ahụ jiri onyonyo ya mee ihe nkwado na-enweghị nkwenye ya. Na 2006, onye na-ese foto rịọrọ ka o were foto Caldwell na Chipotle dị nso na Mahadum Denver, mana ọ jụrụ jụ ịbịanye aka na mpempe akwụkwọ maka iji ihe onyonyo a. Afọ asatọ ka nke a gasịrị, Caldwell hụrụ foto ya na mgbidi na ebe Chipotle dị na Florida na California. Ihe onyonyo ahụ nwere karama na tebụl, nke Caldwell kwuru na agbakwunyere ma mebie agwa ya. Ọ gbara akwụkwọ.
Akụkọ banyere Caldwell na Highsmith na-egosi ụzọ dị egwu ọ nwere ike ịbụ maka ụlọ ọrụ iji ihe oyiyi na-enweghị nyocha ọfụma. A na-enye ihe onyonyo ọha na eze na obere akwụkwọ ikike ma anaghị ewepụta ha ma ọ bụ wepụta ha. Onye na - ese foto ahụ, ọ bụghị ihe nlere anya, na - enye naanị ikike nke onye na - ese foto nwere, nke pụtara na ihe nlere a ka nwere ike gbaa onye mmebe ahụ akwụkwọ ma ọ bụrụ na ejiri ihe oyiyi ahụ azụ ahịa. Ọ bụ nnukwu ịgba chaa chaa.
Otu n'ime ihe a bụ ikwu na azụmaahịa ekwesịghị iji ihe onyonyo ọha na eze mee ihe, kama na-ekwusi ike mkpa ịghọta ọghọm dị. Ekwesịrị iji ihe onyonyo ọha na eze rụọ ọrụ naanị mgbe ị nyochachara nke ọma iji belata ihe egwu dị. Nke a bụ ihe kpatara Dreamstime ji tinye obere mkpokọta ihe oyiyi ọha na eze na webụsaịtị ya yana nnukwu nnakọta nke onyonyo ewepụtara n'efu, nke enyere ikike.
Ghọta ihe ize ndụ nke ọha na eze na ihe oyiyi bụ nzọụkwụ otu. Nzọụkwụ abụọ maka akara bụ ịmepụta usoro nke ịdị uchu. Vetting ajụjụ kwesịrị ịgụnye: Ndi ihe oyiyi a n'ezie uploaded site na-ede akwụkwọ, na “ezuru”? Ndi mbiet emi odu ọnọ kpukpru owo? A na-enyocha ihe oyiyi ahụ? Kedu ihe ga - eme ka ndị na - ese foto were nye nnakọta ihe onyonyo na - enweghị ego? Ọzọkwa, gịnị kpatara eji ese foto na akpaghị aka? Ihe oyiyi ọ bụla nwere mkpụrụ okwu ole na ole, ha anaghị adịkwa mkpa.
Ndị na-ere ahịa kwesịrị ịtụle ihe nlereanya ahụ. Onye nọ na ihe oyiyi ahụ ọ bịanyere aka na mwepụta ihe nlereanya? Na-enweghị otu, enwere ike ịma aka iji azụmaahịa ọ bụla dịka Caldwell jiri Chipotle mee. Ihe mmebi nwere ike ịbụ ọtụtụ nde nde dollar maka otu onyonyo, ọbụlagodi mgbe akwụ ụgwọ ihe nlereanya ahụ. Ọzọ echiche bụ nwere ụghalaahịa mebiri. O doro anya, a naghị egbochi logo, mana dịkwa ka ihe oyiyi dịka akara Adidas mbata atọ na otu akwa uwe.
Ihe oyiyi ọha na eze nwere ike ịbụ akụ bara uru, mana ha nwere nnukwu ihe egwu. Nhọrọ kachasị mma bụ iji foto foto wee kee ihe iji wee pụọ na cliches. Sdị nwere ike ịchọta udo nke uche n'ihi na ha maara na ihe oyiyi dị mma iji, ma na-enweta ezigbo ọdịnaya ha chọrọ iji mee ka ihe ahịa dịkwuo ike. Ọ ka mma itinye mgbalị iji nyochaa onyogho n'ihu, kama ịmekọrịta ikpe mgbe e mesịrị.
Tags: ezigbo foto fotoCarol M. HighsmithChipotlenwebisiinkammebi iwuoge nroụgha ụghaGetty Imagesgoogle image searchgoogle +oke ojijiImageinstagramikpeleah ikechukwumatt cuttsngalaba ọhaihu ọha ngalabafoto fotongwaahịa foto
N'ihe karịrị afọ 20 nke ahụmịhe na imepụta na mgbasa ozi ọhụụ, Serban gosipụtara na ọ bụ onye maara nke ọma, na-agwakọta ihe okike na ikike ikike. Ọ malitere ntọala Archiweb na 1998, onye ndu na-emeri ugo n'etiti ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ webụ na SE Europe, ma na-atụ anya na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ngwaahịa na mbido afọ 2000. Dịka Onye Nchịkwa Ihe okike nke Archiweb o nyeere ọtụtụ ụlọ ọrụ aka ịtọlite ma ọ bụ melite ọnụnọ ha n'ịntanetị. Serban na-ejikwa usoro mmepe azụmaahịa maka Dreamstime, ma na-etinye aka miri emi na arụmọrụ kwa ụbọchị nke ndị ọrụ webụsaịtị. Ọ bụ onye ọhụụ nwere nkà nke kwenyere na ịmebi usoro azụmahịa iji chọpụta nhọrọ ọhụrụ. O jiri igwefoto dijitalụ nke ugbua jiri ọfụma rụọ ọrụ ya na foto ya nke ugbua wee jiri malite. Ọ na-achụso nrọ ya ma ugbu a, Dreamstime, ma e wezụga ịbụ ụlọ ọrụ na azụmahịa, bụ ebe kachasị nzukọ maka ndị na-ese foto na ndị na-emepụta ihe.
You meghere maka sistemụ njikwa ọdịnaya ọhụụ?